မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ်။ သူမကို ပထမဆုံး နမ်းခဲ့တာ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူးနော် - Tameelay
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ်။ သူမကို ပထမဆုံး နမ်းခဲ့တာ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူးနော်
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ်…….
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ်……
သူမကို ပထမဆုံးပွေ့ဖက်သူက ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး…..
သူမကို ပထမဆုံး နမ်းရှုံ့ခဲ့သူကလဲ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး…..
သူမကို ပထမဆုံး ချစ်ခင်ခဲ့တာလဲ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး…..
ဒါပေမဲ့ သူမကို တစ်ဘဝလုံး လက်တွဲပေးရမယ့်သူကတော့ ငါမဟုတ်ဘူးကွာ…..
အကယ်၍ တနေ့မှာ မင်းသာသူမကို မချစ်တော့ခဲ့ရင် သူမကို အပြစ်မဆိုပါနဲ့…..
မရိုက်နှက် မဆူဆဲပါနဲ့…..မချစ်နိုင်တော့ကြောင်း သူမကိူလဲမပြောပါနဲ့…..ငါ့ကိုပဲလာပြောပါကွာ…..
အကယ်၍သာ သင်ဟာယောက်ျား တယောက်ဆိုရင် မိမိရဲ့ ဇနီးမယားကို ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပါ…..
တန်ဖိုးထားပါ…..ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်ယူထားတဲ့ မိန်းကလေးဟာတခြားမိဘတွေရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ သမီးလေးတွေမို့ပါ…..
သမီး မိန်းကလေးဆိုတာ ဖခင်တိုင်းရဲ့ အသဲနှလုံးလေးတွေပါ
အနာဂါတ်သမက်လောင်းသို့ပေးစာ Credit မီးလေး
မင်ျဂလာဆောငျပှဲတဈခုမှာ သတိုးသမီး ဖခငျက သားမကျကိုပွောတယျ…….
မင်ျဂလာဆောငျပှဲတဈခုမှာ သတိုးသမီး ဖခငျက သားမကျကိုပွောတယျ……
သူမကို ပထမဆုံးပှဖေ့ကျသူက ငါပါ မငျးမဟုတျဘူး…..
သူမကို ပထမဆုံး နမျးရှုံ့ခဲ့သူကလဲ ငါပါ မငျးမဟုတျဘူး…..
သူမကို ပထမဆုံး ခဈြခငျခဲ့တာလဲ ငါပါ မငျးမဟုတျဘူး…..
ဒါပမေဲ့ သူမကို တဈဘဝလုံး လကျတှဲပေးရမယျ့သူကတော့ ငါမဟုတျဘူးကှာ…..
အကယျ၍ တနမှေ့ာ မငျးသာသူမကို မခဈြတော့ခဲ့ရငျ သူမကို အပွဈမဆိုပါနဲ့…..
မရိုကျနှကျ မဆူဆဲပါနဲ့…..မခဈြနိုငျတော့ကွောငျး သူမကိူလဲမပွောပါနဲ့…..ငါ့ကိုပဲလာပွောပါကှာ…..
အကယျ၍သာ သငျဟာယောကျြား တယောကျဆိုရငျ မိမိရဲ့ ဇနီးမယားကို ကောငျးမှနျစှာဆကျဆံပါ…..
တနျဖိုးထားပါ…..ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျယူထားတဲ့ မိနျးကလေးဟာတခွားမိဘတှရေဲ့ တနျဖိုးထားရတဲ့ သမီးလေးတှမေို့ပါ…..
သမီး မိနျးကလေးဆိုတာ ဖခငျတိုငျးရဲ့ အသဲနှလုံးလေးတှပေါ
အနာဂါတျသမကျလောငျးသို့ပေးစာ Credit မီးလေး
သင် အိပ်ယာထဲမှာ ဒီအချိန်ထိ ဖေ့ဘုတ်သုံးတတ်ရင် ဒါလေးတော့ ကြည့်ထားသင့်တယ်နော်..။
ညနက်တဲ့အထိ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးသူများ သတိထား ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ …
တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာ အကြောင်း ကျမ ရောင်းတဲ့ “လှိမ့်ဝင် တည်သုံး” အဆောင်အကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင် စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာက ကျွန်တော်စ ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ ။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ ။ လှိမ့် ဝင် တည် သုံး ၁။ …
အသက် ၃၀ ကျော် မမများ ပွင့်သစ်စ ပန်းလို ဖလန်းဖလန်း မဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်မဝတဲ့ ပန်းလေးလိုလန်းဆန်းပါသေးတယ် ။
၃၀ ကျော်မမများအတွက်ရည်ရွယ်လျက် ပွင့်သစ်စ အလှပန်းလို ဖလန်းဖလန်း မဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်မဝတဲ့ ပန်းလေးလိုလန်းဆန်းပါသေးတယ် ။ အကဲလေးတော့ လာမစမ်းနဲ့ အသည်းဇာတ်လမ်းက ရင့်ကျက်ခဲ့ ပြီလေ တော်တန်ရုံနဲ့တော့ ရင်မခုန်တော့ပါဘူးး။ အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ ခြေတလှမ်းက အဖိုးထိုက်တယ်လို့ကောင်လေးတွေ ပြောကြပါသေးတယ် ။ …